हिँडेर पानी भर्न बैतडीबाट डडेल्धुरा ! - Everest Dainik - News from Nepal
हिँडेर पानी भर्न बैतडीबाट डडेल्धुरा !
बैतडी, साउन १५ गते । बसोबास बैतडी जिल्लामा, वर्षायाममा समेत खानेपानी नभएपछि दुईघण्टा हिँडेर डडेल्धुरा जिल्लाको नवदुर्गामा पानी भर्नुपर्छ भन्दा धेरैलाई अपत्यार लाग्न सक्छ । यथार्थमा यो पीडा बैतडी जिल्लाका सिगास गाउँपालिका वडा नं.३ का बासिन्दाको हो ।
पुस्ताैदेखि खानेपानीको समस्या झेल्दै आईरहेका सिगास गाउँपालिका–३ का मैनोला, लगन, हल्कासैनी, माझभ्वाँ, मैतोडा, ठूलसैनी, परचाल र चमडेखर्क गाउँका चारसय घरधुरी पानीका लागि दुईघण्टा हिँडेर छिमेकी जिल्लाको नवदुर्गा गाउँपालिका पुग्ने गरेका छन् ।
हरेक निर्वाचनमा राजनीतिक दलका नेताहरुले पानीका लागि छिमेकी जिल्ला धाउनु पर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने भाषण गरे पनि चुनाव जितेपछि वाचा पूरा गरेका छैनन् ।
याे पनि पढ्नुस बैतडीमा ढुङ्गा खानीमा च्यापिएर एकको मृत्यु
पानीको पीडा सुनाउँदै स्थानीय नन्दा धामीले भनिन्, “दुई घण्टा पैदल हिँडेर डडेल्धुराको नवदुर्गा गाउँपालिका वडा नं. ५ बानबाट ४० लिटरको ग्यालेनमा पानी बोकेर खाँदैछौं । भोट माग्न आउने नेताले चुनाव जितेपछि गाउँमा पानी आउँछ भनेका थिए । गाउँमा न पानी आयो न त नेता नै । नेताको विश्वास लाग्नै छोड्यो ।”
देशको खाका परिवर्तन भएर गाउँपालिका बने पनि गाउँको ‘सिंहदरवार’ले पानीको जोहो गर्न कुनै पहलकदमी नलिएको भन्दै स्थानीय खिन्न भएका छन् ।
स्थानीय पठानसिंह बोहराले भने, “गाउँपालिकामा पटक पटक खानेपानीको समस्याका बारेमा कुरा राखेका छौं । गाउँपालिकाले पनि प्रदेश सरकारलाई लेखि पठाएको छ । योजना आउँछ कि भनेर अहिले प्रदेश सरकार कहाँ धाईरहेका छौं ।”
याे पनि पढ्नुस बैतडीमा प्रहरीसहित ६३ जनाको र्‍यपिड टेष्ट ‘नेगेटिभ’
गाउँपालिकाले खानेपानीको समस्याका समाधान नगरेपछि पानीको समस्या लगेर प्रदेश सरकारकहाँ पुगेको बोहराले बताए । खानेपानीको समस्याका विषयमा सिगास गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिसिंह धामीले बैतडी जिल्लामा बसेर डडेल्धुराबाट पानी बोकेर खानु पर्ने समस्या रहेको भन्दै लिफ्ट योजनाबाट मात्रै गाउँमा पानी पुर्याउन सकिने बताए ।
धामीले भने, “चार÷पाँचसय घरधुरीलाई डुप्के र डुणैताल बाट लिफ्ट गरेर पानी पुर्याउन करोडौं रुपियाँ खर्च लाग्छ । गाउँपालिकाले त्यति महङ्गो लिफ्ट खानेपानी बनाउन नसक्ने भएकोले प्रदेश सरकारसँग सहयोग माग गरेका छाै ।”
पानीको समस्या समाधान गर्न गाउँपालिकाले तत्काल आकाशे पानी संकलन गर्ने योजना बनाउन नसकेको स्थानीयबासीले गुनासो गरेका छन् ।
गाउँमा पानीको चर्को समस्याका कारण शौचालय समेत प्रयोगविहीन छन् । बैतडी जिल्ला खुला दिसामुक्त जिल्ला भए पनि पानीको समस्याले गाउँमा खुला दिसापिसाब हुने गरेको स्थानीय संगीता धामीले बताए ।
खानेपानीको समस्या थाहा पाएकाहरुले यो गाउँका युवाहरुलाई विवाह गर्न छोरी समेत दिन मान्दैनन् । गाउँका युवाको विवाह गर्न गाउँको पानीको समस्या थाहा नपाएका निकै टाढाका गाउँबाट विवाह हुने गरेको स्थानीय युवा पठानसिंह बोहराले बताए । –गाेरखापत्र दैनिक, गोकर्ण दयाल
ट्याग्स: खानेपानी, बैतडी